Yako Inokurumidza Nongedzo kune Kuronga Kupukunyuka kuGeorgia Munguva yePandemic
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Guestpost » Yako Inokurumidza Nongedzo kune Kuronga Kupukunyuka kuGeorgia Munguva yePandemic
Chii chaunosuwa zvakanyanya nezve nyika yepre-denda? Bvunza uyu mubvunzo kune chero munhu anofarira zvekufamba uye ivo vanozoenda vachiita rant nezve kuti vangarasikirwa zvakadii kuongorora maguta matsva, chikafu, uye tsika. Nepo COVID-19 denda rakakanganisa akasiyana maitiro ehupenyu hwedu, mhedzisiro yaro pazvirongwa zvekufamba yakanyanya kukoshesesa kufuratira.
Georgia, ine chivakwa chayo chine hunyanzvi, nzvimbo dzepamusoro, uye nhoroondo dzakasiyana, inopa hupfumi hwekupukunyuka kune vanhu vaneta nekugara pamba. Maodzanyemba kwakadziva kumabvazuva ane eclectic musanganiswa weanoyevedza hamlets, idyllic mataundi, uye maguta emadhorobha. Ine chimwe chinhu chakachengeterwa mufambi wese.
Asi kana uri kuronga rwendo rwekuenda kuGeorgia panguva yedenda, uchasangana nemubvunzo wemibvunzo nematambudziko.
Zvakachengeteka here kuenda kuGeorgia izvozvi? Ndinogona here kushanyira Georgia kunyangwe ndisina kunyatsojekerwa? Ini ndinofanira kupfeka masiki munzvimbo dzeruzhinji? Ini ndinofanira kutakura yakaipa RT-PCR bvunzo bvunzo kuti ndipinde mudunhu?
Ingori chidimbu chemibvunzo inozadza pfungwa dzako nguva yaunofunga nezvekuenda kuGeorgia. Mune ino blog, isu takarongedza ruzivo rwese rwaunoda kuti unakirwe nezororo rakachengeteka uye rinonakidza-rizere muGeorgia. Ngatitarisei.
Ndeapi Iye Zvino COVID-19 Mamiriro ezvinhu muGeorgia?
Huwandu hwehutachiona hweCOVID-19 hwakasimbiswa muGeorgia hwave huchiwedzera kubva muna Chikunguru 5, 2021, apo nyika yakaona pakati nepakati pegore. Hurumende yakashuma avhareji yematare matsva mazana manomwe nemazana mana zuva rega rega pasvondo rapfuura. Iko kusvetuka kwe7,400x uchienzaniswa nenhamba kubva kumavhiki manomwe apfuura.
Vanoda kusvika zviuru zvishanu COVID-5,000 varwere vari kurapwa vari kuzvipatara zvakasiyana zveGeorgia. Hutano hutano zvivakwa muhurumende zvave kushanda pa 90% yeavo ICU kugona.
Izvi zvinoreva here kuti haufanire kuenda kuGeorgia zvachose?
Zvakanaka, hapana nzira yakapusa yekupindura uyu mubvunzo. Iyo yakanaka pfungwa yekudzivirira chero nzira yekusave-kwakakosha kufamba panguva yedenda. Asi pane nzira dzekuvimbisa kuchengetedzeka uye kugara zvakanaka, kunyangwe iwe ukasarudza kuenda kuGeorgia izvozvi.
Zvakadiniko Nezvirambidzo zvekufamba muGeorgia?
Sekunyora uku, Georgia yakavhurika vafambi vanobva mukati meUS Nyika iri kutambirawo vashanyi vepasirese, vachidzivirira nyika shoma, senge India, Iran, South Africa, neChina. Zvakare, hapana zvimwe zvinomanikidzwa zvinodiwa kuti vafambi vaende kunogariswa mushure mekuuya kwavo kuGeorgia.
Vafambi vekune dzimwe nyika vachiri kufanira kupa yakaipa RT-PCR mushumo (kwete akura kupfuura maawa makumi manomwe nemaviri) pavanosvika. Iko hakuna mutemo wakadai wevanoenda kumba.
Zvizhinji zvekushanyirwa kwevashanyi, maresitorendi, mabhawa, uye zvimwe zvisingakoshe nzvimbo dzebhizinesi zvakavhurika. Asi ivo vari kushanda pakadzikira chinzvimbo, uye vangangove vakaendesa yakawedzera COVID-19 matanho ekuchengetedza. Saizvozvo, zvifambiso zvevoruzhinji zviri kushanda munzvimbo ine mashoma mumaguta mazhinji.
Ungaronga Sei Rwendo Rwako kuGeorgia?
Kutanga, unofanira kuyeuka kuti ganhurana-dzakanangana nekufamba-ganhuriro dzekufamba dziri kuramba dzichichinja. Ive neshuwa yekutarisa ichangoburwa nhungamiro kubva kune inovimbika sosi, senge iyo CDC webhusaiti. Uyezve, tarisa nhau dzemuno kuti utarise zemo rehutachiona hweCOPVID-19.
Heano mamwezve matipi ekuwedzera ekukubatsira kuti unyatso simbisa rwendo rwako kuenda kuGeorgia:
Shanyira Nzvimbo Dzinozivikanwa-Diki
Iwe haudi mumwe munhu kuti akuudze kuti nzira yakanakisa yekuchengetedza novel coronavirus iripo ndeyekugara kure nenzvimbo dzakazara. Vazhinji vashanyi vanoshanyira Georgia vanoenda kumaguta akakurumbira, seAtene neAtlanta.
Asi Georgia ine zvakawanda zvekupa. Kana iwe uri kutsvaga yakadzikama uye yakavharika nzvimbo dzevashanyi muGeorgia, funga kushanyira mataundi asina mvumo, akadai seSnellville neDahlonega. Idzi nzvimbo dzinokupa iwe tarisiro yeiyo quintessential runako rweGeorgia ichikurega uchinakidzwa nezororo rako padanho rakanaka.
Iwe unogona zvakare kuronga rwendo kuenda kune yakasarudzika taundi reSavannah kana iyo pikicha-yakanaka Goridhe Isles. Usakanganwa kutarisa zviripo zvekufamba usati wagadzira yako yekufamba.
Tarisa mamiriro ekunze
Georgia inonakidzwa nemamiriro ekunze ane hunyoro ane mwaka wakareba, unodziya uye kutonhora kwechando. Nyika inowanzoitika kumvura zhinji uye mabhanan'ana. Zvakare, mamiriro ekunze anowanzosiyana zvichienderana nenzvimbo.
Ndosaka iri nguva dzose iri zano rakanaka kutarisa iyo Mamiriro ekunze muSnellville, Dahlonega, Savannah, nedzimwe nzvimbo dzaunoda kushanyira kuGeorgia. Ichave nechokwadi chekuti unonakidzwa nekunakirwa-kuzere uye kushushikana-kusununguka zororo kunyangwe hosha iyi.
Iva Nehanya Nezve Chengetedzo Yako
Nepo nzvimbo zhinji muGeorgia dzingave dzisisina mutemo wekumanikidza, ita shuwa kuti unopfeka chifukidzo pese paunoshanyira chinokwezva vashanyi. Usakanganwa kutevera ruoko rwehutsanana uye magariro ekuparadzanisa maprotocol. Kana iwe uchienda kunodya, ita shuwa kuti iwe unobvunza iyo yekudyira nezve matanho ekudzivirira aari kushandisa parizvino.
Kunyangwe iwe uchitsvaga kwevhiki-refu kupukunyuka kana kukurumidza kupera kwevhiki, Georgia ine chimwe chinhu chekupa kune wese munhu. Tsvagurudza zvirambidzo zvekufamba usati waronga rwendo rwako. Tarisa mamiriro ekunze zvisati zvaitika kuti udzivise chero matambudziko asina basa panguva yerwendo rwako. Zvakare, sarudza nzvimbo dzinozivikanwa zvishoma kuti udzivise vashanyi vanozvifunga, uye unakirwe nezororo rakachengeteka uye nerunyararo.